Niala An-Daharana Tamin’ny Fifaninanana Lalao Echec ny Zazavavy Iray Rehefa Nolazain’ny Mpikarakara Fa “Manaitaitra” Ny Akanjony Hatreo Amin’ny Lohaliny · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Mey 2017 5:25 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Nederlands, Türkçe, Español, English
Nolazain'ny mpikarakara fifaninanana echec ho manaitaitra izay akanjo izao. Sary avy amin'ny pejy Facebook an'i Kaushal Kal
Niala an-daharana tamin'ny fifaninanana echec tao Malayzia ny zazavavy 12 taona iray rehefa nisy mpikarakara nilaza fa “tsy mety” sady mandika ny fomba fitafy tsy maintsy anaovan'ny mpifaninana ny zipony hatreo amin'ny lohaliny.
Nivoaka tao amin'ny tsanganana Facebook-n'ny mpanazatra ilay zazavavy izany ary nalaza an-tserasera tao anatin'ny fotoana fohy. Nanoratra i Kaushal Khandhar fa nandritra ny fifaninanana, nisy mpikarakara iray nanatona ilay zazavavy sy ny reniny momba ny akanjony “manaitaitra” izay azo heverina ho “fakampanahy amin'ny zoron-kevitra lavitra, lavidavitra.”
Ny hany nolazain'ny fomba fitafy rehefa mifaninana lalao echec ao Malayzia anefa dia hoe tsy maintsy “mendrika jerena” ilay mpilalao.
Niezaka ny hividy akanjo vaovao ny reniny saingy efa nikatona ny tranombarotra tao amin'ny faritra. Noho ny henatra fa noampangaina ho nanao fitafiana “tsy mety” ilay zazavavy dia niala an-daharana tsy nanohy ny fifaninanana.
Namoaka ny sarin'ny raobin'ilay zazavavy i Kaushal Khandhar hanaporofoana fa diso izany filazana fitafy tsy mendrika izany. Nampiany avy eo fa mitaky fialan-tsiny avy amin'ny Mpikarakara Nasionalin'ny Lalao Echec ny fianakavian'ilay zazavavy:
Niteraka fahasahiranan-tsaina sy fahamenarana ho azy iny zava-nitranga iny.
RIKORIKO tanteraka tamin'ny nataon'ny talen'ny fifaninanana tamin'ny zazavavy 12 taona sy ny reniny izahay. Niteraka fahaverezam-potoana sy vola efa nolaniana teo aloha, nandritra ary taorian'ny fifaninanana tamin'ny fanazarana, fisoratana anarana, saran-dalana, saran-dasy ary izay mety ho fandaniana hafa izany.
Efa ho roapolo taona izao no nilalaovako echec teto Malayzia fa tsy mbola nahita karazan'olana toy izao mihitsy aho. Ity no tokony ho sady voalohany no farany amin'ny karazana olana toy izay, tsy tokony hanaiky ny zavatra toy izao ato amin'ny vondrom-piarahamonin'ny lalao echec mihitsy na izaho na iza na iza.
Niteraka fahatezeram-bahoaka tamin'ny mpikarakara ny fifaninanana echec ilay lahatsoratra Facebook. Misy ny mieritreritra fa taratry ny fiakaran'ny herim-panintonan'ny vondrona saroti-piaina [mg] sy hiringiriny ara-pivavahana ao Malayzia izao toe-javatra izao.
Nitsipaka ny talen'ny fifaninanana hoe nanery an-drazazavavy hiala amin'ny fifaninanana. Ary nametraka fitoriana tao amin'ny polisy rehefa nahazo hafatra fankahalana an-tserasera sy fandrahonana ho faty. Nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety nataony, nilaza izy fa “voahendrikendrika” tamin'ny raharaha:
Naharay hafatra maherisetra sy fandrahonana tao amin'ny Facebook sy tamin'ny alalan'ny mailaka aho. Nampiasa voambolana tahaka ny hoe ‘mpametaveta zaza’ sy ‘tsy valahara’ aho. Mba nitady hafa-panohanana aza aho saingy tsy nisy mihitsy izany.
Rehefa namakafaka ny toe-draharaha ny Federasiona Malayziana ny lalao Echec tamin'ny voalohany dia niteny fa tsy nahintsana noho ny fitafiny ilay zazavavy. Tsy nanaiky ny hanohy ny famotorana ry zareo rehefa nahare fa efa nanaovana fitoriana tany amin'ny polisy ny raharaha.
Raha nifototra tamin'ny tati-baovao dia notsipahin'ny mpikarakara ny fifaninanana lalao echec ny filazana fanintsanana ilay zazavavy — ary marina izany satria ilay zazavavy no niala an-daharana tamin'ny fifaninanana. Saingy nangina ry zareo rehefa nasaina nifantoka tamin'ny filazana ny “tsy fetezan'ny” fitafy tamin'ilay zazavavy sy ny reniny.
Namoaka fanambarana mandrisika ny Federasiona Malayziana ny lalao Echec hijery lalina kokoa ny raharaha ny Minisitera misahana ny Vehivavy, ny Fianakaviana ary ny Fampandrosoana ny Fokonolona :
Ny fahafahan'ny ankizy mandray anjara amin'itony hetsika ity dia tsy fandranitana ny fahaizana fotsiny fa fotoahana ahafahana mifangaro, mifanakalo hevitra, mizara traikefa ary mifandray na dia samihafa foko, fananahana, fanabeazana, saranga ara-toekarena sy fivavahana aza.
Notoloran'i Peter Long, avy ao amin'ny Ivotoera Fahalavorarian'ny Lalao Echec, izay Akademiam-pirenen'ny Federasiona Malayziana ny Lalao Echec ihany koa, hevitra ny mpikarakara ny fifaninanana hiala tsiny amin'ilay zazavavy sy amin'ny fianakaviany:
Mialà tsiny amin'ilay zazavavy fotsiny, atao araka ny tokony ho izy. Ekena ny manao fahadisoana, ny mandiso. Saingy tsy ekena ny manafina, ary ny ratsy indrindra dia ny miala bala [andraikitra], ary miaraka milaza fa izany no vahaolana. Aza atao lasibatra ilay zazavavy, ny reniny na ilay mpanazatra namoaka ny raharaha.
Mila mampahatsiahy antsika rehetra ve aho fa miresaka zazavavy 12 taona isika eto? Te-hino tanteraka aho fa takatsika tsara hoe ny mahasoa ilay zaza no zava-dehibe indrindra.
Nanizingizina i Terence Fernandez, mpanoratra fa ” tsy ny filazana fanitsakitsahana ny fepetran'ny fomba fitafy ihany no tokony hojeren'ny polisy fa ny zavamisin'ilay zaza fantarin'ny olon-dehibe iray amin'ny fananahany.”